Xumbo hadalka maadda ah: maxay yihiin iyo noocyada buufinnada jira? | Abuurista khadka tooska ah
Xumbo hadalka maadda ah
Maanta majaajillada ayaa ka mid ah "buugaagta" ay dhallinyaro badani ku bilaabaan wax akhriska. Ahaanshaha iskudhaf sawirro iyo qoraal ah, iyaga ayaga waxaa u fududahay in la akhriyo, kana culus culus buug aan iyaga ku jirin (ama aan heerkaas ku jirin). Sidoo kale, inay yihiin wada hadallo gaagaaban, oo lagu soo daray goobooyin majaajillo ah, iyagu ma haystaan ​​qoraallo badan oo intaas way ka sii jecel yihiin.
Laakiin, Waa maxay goobooyin majaajillo ah? Waxaa jira kala duwan? Soo ogow wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato arrintaan aadka muhiimka u ah ee majaajillada iyo kartoonnada, waxaadna arki doontaa sida buufin kastaa u meteli karto ficillo ama dareenno kala duwan.
1 Waa maxay khudbada buugga majaajillada ah xumbo
2 Cunsurka khudbadda majaajillada xumbada
2.1 Waa maxay waxa ka kooban xumbada maadda ah?
2.2 Waa maxay qaarada ku jirta buugga majaajillada xumbada?
3 Noocyada goobooyin hadalka qosolka ah
3.1 Hadalka buugga majaajillada ah xumbo
3.2 Fikir xumbo
3.3 Xumbo majaajillo ah: qaylada
3.4 Ku ooyaya khudbad majaajillo ah xumbo
3.5 Xumbada hadalka
3.6 Xumbo Qosol: Whisper
3.7 Sandwich laba jibbaaran
3.8 Hadallada maadda ah ee majaajillada ah: wada hadalka isla waqtigaas
Waa maxay khudbada buugga majaajillada ah xumbo
Hadalka buugga majaajillada ah xumbo, sidoo kale loo yaqaan buufin, Waa curiye loo isticmaalo majaajillo, majaajillo ama caricature si uu u matalo waxqabadka hadalka. Sidan oo kale, iyada oo loo marayo jaantuskan, jilayaasha warqadda loo oggol yahay in ay yeeshaan "cod," maxaa yeelay ujeedadu waa in ay la yeeshaan wada hadallo jilayaasha kale ee sheekada ah.
Asalka sandwiches-kani wuxuu ka dhacayaa qarnigii toddoba iyo tobnaad, Ingriiska, halkaas oo sawir-qaadayaasha iyo sawir-qaadayaasha ay u isticmaali jireen waqti ka waqti. Laakiin kartoonkii ugu horreeyay ee si joogto ah u xakameeya wuxuu ahaa Hogan's Alley, 1895, oo ah majaajillo ka baxsan 'Outcault', in kasta oo runtu tahay in laga wada hadlayo mowduucaas maaddaama khubarada qaarkood u maleynayaan in arintu sidaas ahayn.
Marka laga hadlayo Yurub, qosolka qosolku waxyar ayuu ku qaatay inuu yimaado. Wuxuu ku sameeyay 1925 Alain Saint-Ogan iyo Zig et Puce. Iyo haddii aad rabto inaad ogaato, Japan wali waxay ahayd inay sugaan illaa 30s si ay u helaan. Midka koowaad? Sako Shishido oo wata Speed ​​Taro iyo Ichiro Suzaki iyo Takeo Nagamatsu oo ay weheliyaan Ogon Bat.
Cunsurka khudbadda majaajillada xumbada
Xumbada majaajillada waxay ka kooban tahay laba cunsur oo muhiim u ah dhexdooda: waxa ku jira iyo qaaradda.
Waa maxay waxa ka kooban xumbada maadda ah?
Nuxurka hadalka buugga majaajillada ah xumbo ayaa ka dhigaysa tixraac fariinta gudaha, taasi waa, waxaad rabto inaad muujiso. Dhexdeeda, waxaa muhiim ah in lagu xisaabtamo maahan oo keliya waxa la sheegayo, laakiin sidoo kale nooca ama font loo adeegsaday, onomatopoeia iyo xitaa sarbeebyada muuqaalka ah.
Taasi waa, waxaad ku ridi kartaa xumbo qosol leh nal iftiin shidan, oo leh wadnaha, oo leh astaamaha doollarka ... Ama sidoo kale metelaya dhawaaqyada (sida qarax (boom)).
Waa maxay qaarada ku jirta buugga majaajillada xumbada?
Qaaradda ku taal maaddada majaajillada ayaa ah qaabka ay tahay. Had iyo jeerna isku mid ma aha. Xaqiiqdii, waxaa jira dhowr nooc oo cunto fudud ah oo macnahaas leh. Hadda, foomkaas gudahiisa, waxaad sidoo kale leedahay laba qaybood oo kala duwan:
Dusha sare, taas oo ah qaabka sare ee sandwich-ka, oo ilkaha la arki karo, ku dayanaya daruur, dhibco leh ... Xitaa si uu u matalo dareenka qaarkood, wuxuu u qaabeyn karaa sida guluubka nalka, qalbiga ...
Dabada, sidoo kale loo yaqaan dabada, oo had iyo jeer loo jiheeyo dabeecadda soo saarta buufinnadaas, taas oo ah, qofka hadla. Marka aysan cidna u jeedin, waxaa la yiraahdaa "cod baa ka sarreeya." Tani badiyaa had iyo jeer waxay ku jirtaa qaabka afkiisa, had iyo jeer waxay u jeeddaa qofka hadlaya, laakiin mararka qaarkood, waxayna kuxirantahay muuqaalka goobooyin majaajillo ah, tani way is beddeli kartaa (inay ahaato uun xargo, wareegyo, iwm).
Noocyada goobooyin hadalka qosolka ah
Sidaad ogtahay, ma aha dhammaan goobooyin majaajillo isku mid ah. Xaqiiqdii, waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo iyaga ka mid ah, sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan iyaga kuugu soo dhoweynno adiga hoosta.
Hadalka buugga majaajillada ah xumbo
Tani waa tan ugu caansan, iyo sidoo kale kuwa ugu caansan adduunka. Loo adeegsaday muuji waxa jilaagu ku sheegayo kartoonka, taasi waa, wada hadalka aad dadka kale la leedahay. In kasta oo aad had iyo jeer ka fikiri karto nooca fidsan iyo midka oval, run ahaantii qaabku aad buu isu beddeli karaa (oo badanaa wuxuu kuxiran yahay farqiga udhaxeeya guddi walba si uu ugu habboonaado)
Hada, kawaran hadaadan qof kale lahadleynin laakiin aad fekerayso? Ama keligaa hadlaya? Waa hagaag halkii aad ka isticmaali lahayd wadahadalka, isticmaal midka fikirka qaba. Tan waxaa lagu gartaa inay tahay sida daruurta oo kale. Haa, sida haddii ay ahayd wax firidhsan oo sidaas darteed, taasi waxay khuseysaa oo keliya dabeecaddaas maxaa yeelay waa wax aysan dadka kale aqoon.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa badanaa ka horreeya wareegyada qaar, oo waliba tilmaamaya inay tahay wax dabeecadda gudaheeda lagu sheegay.
Xumbo majaajillo ah: qaylada
Miyaad akhriday majaajilo meesha aad ka qaylinayso? Hagaag, xaqiiqdii waad ogaatay in, markay taasi dhacdo, sandwich-ka uusan u ekaan karin daruur oo kale, mana lahan khadad qalooca, laakiin waa halkii ugu sarreysay. Qaabkaas, waan ogahay wuxuu ku nuuxnuuxsaday inay jiraan kor u kaca codka. Waxay la mid tahay "qarax."
Ku ooyaya khudbad majaajillo ah xumbo
Dhab ahaan, cunnooyinka noocan ah Waxaa loo isticmaali karaa muuqaallada oohin iyo dhidid labadaba. Waxaana loo matalay inay tahay wasakhda biyaha ee, hareeraheeda, ay jiraan dhibco biyo ah.
Kahor intaanan arag wadahadalka laakiin, Maxaa dhacaya haddii dabeecadda, hakad ka dib, ay hadalka sii wadato? Hagaag, waxaad leedihiin wada hadal halka hal dabeecad kaliya kuhadasho sidaas darteedna, labo xumbooyin hadal ah ayaa la adeegsadaa oo hal dhinac midba midka kale ku xiran, sidaa darteed waxaa loo arkaa in isla dabeecadaas mar kale hadlayso, oo hakad ku jirta inta udhaxeysa wadahadalka iyo wadahadalka.
Xumbo Qosol: Whisper
Ugu dambeyntiina, waxaad leedahay xumbada majaajillada xanta ah. Sababtoo ah haa, iyaguna way faqi karaan waxyaabo. Iyo inuu matalo, khadadka jajaban ayaa loo isticmaalaa. Taasi waa, karbaash ka kooban sandwich dhammaystiran.
Sandwich laba jibbaaran
Weligaa ma la kulantay a rooti rooti ah? Hagaag, taasi waxay tilmaamaysaa, xaaladaha badankood, in afhayeenku yahay sheekeeye. Xaqiiqdii, waxaa mararka qaarkood loo adeegsadaa in akhristaha lagu meeleeyo meel ku saabsan wax dhacay.
Sidoo kale waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo sanado, magaalooyin ama dalal ama xitaa in laga hadlo dhinac taariikhda ka mid ah (xaalad la geliyo).
Hadallada maadda ah ee majaajillada ah: wada hadalka isla waqtigaas
Bal qiyaas muuqaal meesha jilayaal kala duwan ayaa isku wax sheegaya. Hagaag, halkii ay u qori lahaayeen sandwich mid kasta, waxay ku dhexgalaan hal mid kaas oo dabo (ama dabo) u dhigma dabeecad kasta ay ka soo baxaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Xumbo hadalka maadda ah